တင်းကျပ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 1oz နျ Standard PCB FR4 Tg135 ENIG အရည်အသွေးမြင့်ပုံနှိပ်ဆားကစ် - တရုတ်တင်းကျပ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 1oz နျ Standard PCB FR4 Tg135 ENIG အရည်အသွေးမြင့်ပုံနှိပ်ဆားကစ်ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
တင်းကျပ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 1oz နျ Standard PCB FR4 Tg135 ENIG အရည်အသွေးမြင့်ပုံနှိပ်ဆားကစ်
102*165မီလီမီတာ / 1up
ENIG 1u” မျက်နှာပြင်ကုသမှု,2အလွှာနျ Standard PCB လူပျိုအရွယ်အစားအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်, ကြေးနီထူ 1oz ဖြစ်ပါသည်, အထူ 1.6mm ဖြစ်ပါသည်±0.1မီလီမီတာ, ပစ္စည်း FR4 ဖြစ်ပါသည်, Tg135, Applications ကိုအီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ပါသည်, "လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်, အထူးဝန်ဆောင်မှုများကို, ကောင်းသောဘဏ်ဍာ" အများအပြားဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပြီး. ပုံနှိပ် circuit ကိုထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အစအဦးကတည်းက, ကျနော်တို့အသေးများထုတ်လုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ, monolayer ၏အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစားစီးရီး, တဖက်သတ်-နှစ်ဆသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအလွှာကိုပုံနှိပ်ဆားကစ်, automated လိုင်းများနှင့်မှုတွင် Of-The-Art စက်ယန္တရား , အရန်အဆောက်အဦတွေနဲ့ပြည့်စုံ, အဆိုပါအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်ပေးပို့အကြိမ်ပြည့်စုံ၏ရယူအာမခံ.
multi အလွှာမြင့်သောကြိမ်နှုန်းဘုတ်အဖွဲ့, multilayer ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့(MLB), တင်းကျပ် multilayer ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့. 12 အလွှာ, 3.0မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့